Geeridiisii Baan U Iibiyay-Eng. Hibo Axmed Ismaaciil | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Geeridiisii Baan U Iibiyay-Eng. Hibo Axmed Ismaaciil
Waxaa Qortey: Eng. Hibo Axmed Ismaaciil
Aaboo Mawliid waxa uu ahaa Aabe dhalay afar caruur ah laba hablood iyo laba wiil waxa kale oo ay wada noolaayeen Hooyo Xaliimo oo ahayd aafadiisa ubadkana u dhashay, afartoodaa ilmoodna na waxa la kala odhan jiray Faadumo ,Fadxiya ,Mahad iyo Mukhtaar oo Faadumo curad ahayd sadexda kale na ay ka yar yaraayeen, aqal iyo reer waxa yagleelay labada hablood ee waa wayn xaga labada wiilna midna dugsiga dhexe ku jiray midna ka sare so galay. Aaboo Mawliid waxa uu ahaa xisaabiye dawladeed nolosha reerkiisuna waxay ku jirtay nolosha dhexe ilaahay mahadii wax ka maqan may jirin. Subax Suxyada ka mida ayaa waxa soo kacaday hooyo Xaliimo sidii caadada u ahayd markay tukatay salaadi subax ayuu so galay gurigii Aabo Mawliid oo uu wehelinayo Mukhtaar yare iyago ka soo noqday xagaa iyo misaajidka oon gurigaba ka fogayn hooyo Xaliimaa tiri oo Mahad saaka miyaanu idin raacin Aabo Mawliid mayee saaka qolka waanu ku gargaraacno markuu furi waayay ayaanu is nidhi waydun habsaami doontaan oo waanu ka tagnay waa hagaag bay ugu jawaab celisa aafadiisi.